Ukuphupha ngemali ewuhlweza kusho ukuthini – iAfrika
Ukuphupha ngemali ewuhlweza kusho ukuthini
Ukuphupha ngokuthola imali ewuhlweza kumela imizwa emihle ngezinto ezizuzwayo empilweni uma uphapheme. Ukuzizwa ujabulile ngokuba unokungaphezu kwalokhu obunakho kuqala. Ukuqondidisa izinkinga, ukuba namandla engeziwe, noma inkulululeko ezuziwe. Kungamela nemizwa yokuba nenhlanhla. Ukuthola into ngenhlanhla noma ukuqondana ngendlela engajwayelekile empilweni lapho ophapheme khona. Amathuba agejiwe noma alahlekile asephinde abuya. Ukwazi ngokubaluleka kwento esempilweni yakho.
Ukuphupha ngemali ewuhlweza enqwabelene kumela imizwa ngawe uba nokuningi kunalokhu obunakho kuqala. Kungaba futhi ukuthi ugcina amasu noma ulindile ukuthola usizo noma ithuba. Ukwazi ngokubalulekile okubekiwe okusengxenyeni ethize yempilo yakho.
Ukuphupha ngokuqhwabaza imali ewuhlweza ngendlela enganendaba kumela ukuzwa kokungabaluleki kwento ozibone uzuza ngayo. Inhlanhla noma okubalulekile onganendaba nakho. Ukuziphatha ngendlela enganendaba ngento eyinhlanhla eyenzekile kuwe. Ukuzizwa unenhlanhla engaphezu kwbanye abantu noma ukuzizwa umuhle ngaphezu kwabanye abantu.
Ukuphupha ngokudlala umdlalo wokukhetha inhloko noma umsila wemali ewuhlweza kumela ukuzizwa noma ukuziphatha ngendlela engenandaba ngesinqumo. Ukudedela impilo noma isimiselo sikukhethele into.
Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyisiliva kumela inhlanhla noma ukuqondana kwezinto nawe ozibona ukuithanda. Ungazizwa unenhlanhla ukuba nokungaphezu kwalokhu obunakho ngaphambilini. Ithuba noma okungalindelekile okukulethele ukuqondisisa, amandla noma inkululeko.
Ukuphupha ngemali ewuhlweza eyigolide kumela imizwa emihle ngamandla noma amasu okwazi ukuwasebenza noma yinini mawuthanda. Ukuzibona uthanda into enokubaluleka onayo. Kungaba ukuthanda amathuba atholakalela wena. Ukujabulela ukwazi ukuthi unamandla noma inkululeko ehlale ikhona uma uyifuna.
Ukubona omunye umuntu enemali ewuhlweza yegolide kumela wena noma oumnye umuntu ojabulela ukubona inkululeko ekuzikhetheleni noma amandla okwenza okuthandayo.
Ukubona abantu ababi benemali yegolide ewuhlweza kumela izinto ezingathandeki ngawe Kungakhombisa izimo ezinzima zempilo ezenza wesabe noma udumale. Ungazizwa futhi ungenamandla okumisa umuntu onamandla noma amasu angephezu kwawakho.
Ukuphupha nokucosha uhlamvu lwemali kungamela imizwa yokwenza imizamo yokufeza amacebo, ukuqondisisa noma izinjongo ozicabangile. Okubi ukuthi kungasho ukumosha isikhathi ngamacebo ocabanga ukuthi mahle kodwa angemahle.
Isho ukuthini imali emaphusheni akho?
Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado
9 thoughts on “Ukuphupha ngemali ewuhlweza kusho ukuthini”
29/10/2019 at 23:40
Mina ngiphuphe umnakwethu umumkhulu enginika imali ewuhlweza emhlophe kuyini loko
16/11/2019 at 09:11
Bheka nalu ulwazi esinalo lapho uphupha unikwa imali, funda lapha: https://iafrika.org/amaphupho-ngemali/ Nazi ezinye izinto ezingabikezelwa wukuphupha unikezwa imali, funda lapha: https://iafrika.org/ukuphupha-ngemali-kusho-ukuthini-ngempilo-yakho/
29/10/2019 at 23:35
MN ngiphuphe umnakwethu umumkhulu enginika imali ewuhlweza emhlophe kuyini loko
16/11/2019 at 09:10
Incazelo lapho umnakwenu evela khona ephusheni lakho ungayithola ngokubheka lapha: https://iafrika.org/amaphupho-okunqoba/
11/10/2019 at 21:17
Kusho ukuthini ukuphupha unikela ngemali emhlophe
20/10/2019 at 21:20
Nansi incazelo esinayo ngokuphupha imali eyisiliva: https://iafrika.org/kusho-ukuthini-ukuphupha-ngesiliva/
27/09/2019 at 04:54
Uma uphupha inyoka yamanzi njalo nje
27/09/2019 at 05:43
Ake ubheke nalu ulwazi esinalo ngokuphupha izinyoka: https://iafrika.org/amaphupho-ngenyoka/
13/08/2017 at 07:41
Molweni ndiphuphe ndihamba nomyeni wam ebeyofuna umsebenzi xa singena kulendlu ebeye kuyo afice umngani wakhe ingathi nguyw ophetheyo athi xa embulisa azombamba isandla umngani abe ngathi akamaz amcenge for umsebenzi athi umngani abazani. Ndithi masihambe sihambe nyhan xa ndiphuma emnyango ndithi apha kumngani iintaka zibhabha zibhabhe zibuye zizosela phantsi kusasa ndim njengokuba namhlanje kunguwe avele angabinandaba nalento ndiyithethayo.Xa ndihamba ndibone umyenam azibhuqa eludaken ndimnqande athi uyagoduka akaqhubeki nofesa ndiqhubeka mna andinike Imali eyisiliva eninzi athi yeyokhwela xa ndigqibohlukana naye ndibone enye intombi endandifunda nayo ndithi mayenze idrink then ndifake isandla epokothweni kuyo ndifumane oR5 abayi2 ndiphinde ndibone ubhuti athi mandiyothenga idrink andinike iR1 ndayifaka kum epokothweni ndothuka
Leave a Reply to iAfrika	Cancel reply